नेपाल र मोरिसस आज आमन-सामने हुँदै, खेल अघि प्रशिक्षक अलमुताइरीले के भने ? – List Khabar
Home / समाचार / नेपाल र मोरिसस आज आमन-सामने हुँदै, खेल अघि प्रशिक्षक अलमुताइरीले के भने ?
नेपाल र मोरिसस आज आमन-सामने हुँदै, खेल अघि प्रशिक्षक अलमुताइरीले के भने ?
admin January 29, 2022 समाचार Leaveacomment 40 Views
काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज मोरिससविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खैल्दैछ। नेपाल र मोरिससको खेल आज पौने ५ बजेबाट दशरथ रंगशालामा फ्लड लाइटमा खेल्नेछ। यो खेलका लागि दुवै टिमले तयारी पुरा गरेका छन्। नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले सधैझै हारको दोष आफू लिने र जितेको श्रेय खेलाडीलाई दिने बताएका छन्।
त्यस्तै, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरणकुमार चेम्जोङले अफ्रिकन राष्ट्र मोरिससविरुद्ध हुने दुईवटा मैत्रिपूर्ण खेल घरेलु खेलाडीका लागि फरक अनुभवको अवसर भएको बताएका छन् ।
किरणले इतिहासमै पहिलो पटक अफ्रिकन राष्ट्रसँग खेल्न लागेकाले फरक अनुभव हुने बताएका हुन् । ‘इतिहासमै पहिलो पटक अफ्रिकन टिमसँग खेल्न गइरहेका छौँ । त्यसैले मोरिसससँगको खेल हाम्रो लागि एक फरक अनुभव हुनेछ । नेपाली खेलाडीहरुले घरेलु लिग खेलिरहेकाले सबै जना शारीरिक र मानसिक रुपमा फिट रहेका छन्’, उनले भने ।
नेपालले शनिबार र मंगलबार मोरिसससँग खेल्दै छ। नेपाली टोलीका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले विगतका गल्तीहरुलाई सुधार गर्दै खेल्ने बताए।
‘मुख्यत यो हामीले एसिया कपको तयारिका लागि खेलेका हौँ। नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिइरहँदा पछि राष्ट्रिय टोली दह्रो बन्छ भन्ने आशा गरेका छौंँ’, उनले भने।
यो खेलका लागि नेपाली टिमले दुई हप्तादेखि अभ्यास गरिरहेको छ। यता मोरिससको टिमले पनि डिसेम्बर सुरुदेखि अभ्यास गरिरहेको छ। तर,मोरिससले अढाई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। त्यसमाथि उनले पछिल्ला पाँच खेलमा जित निकाल्न सकेको छैन।
Previous यी २० जिल्लामा कोरोनाको पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित
Next ओ-मिक्रोनपछि फेरि देखियाे अर्काे ख`तरनाक भेरिएन्ट, हरेक ३ संक्रमितमध्ये एक जनाको मृ-त्यु हुने !